Baolina kitra Afrikana Nandresy ny Elgeco Plus, voatana ady sahala ny CNaPS Sport
Ramaroson Jean Michel Tsy nahatratra firotsahana ho kandidan’ny COM
Ny alatsinainy 14 janoary teo vao tafaverina teto an-tanindrazana Atoa Ramaroson Jean Michel filohan’ny Federasion’ny Basikety Baolina Malagasy am-perinasa noho ny iraka nataony tany ivelany ka tsy nahatratra ny fe-potoana farany nametrahana antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho filohan’ny COM
Tenisy Tompondakan’i Afrique Australe U 14 sy U 16 Amboara 10 no voandalana azon’ny solontena Malagasy
Nifarana ny talata 15 janoary teo ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika tapany atsimo sokajy U 14 lahy sy vavy sy U 16 lahy sy vavy notontosaina tany Wondhoek any Namibie nanomboka ny 7 janoary 2019 lasa teo.
Baolina kitra Analamanga Ligue 1 Lavon’ny Elgeco Plus teo an-kianjany ny Uscafoot
Tontosa ny alahady 13 janoary 2019 teo tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina ny andro faha-2 tsy vita tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga ligue 1 eo amin’ny taranja baolina kitra.
Basket Afroleague 2019 Iray vondrona amin’ireo kalaza ny Cospn Madagasikara
Vita tany Abidjan Côte d’Ivoire tamin’ny sabotsy 12 janoary takariva teo ny antsapaka amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika eo amin’ny ekipa tompondaka isaky ny Zône na ny Afroleague 2019 eo amin’ny taranja basket izay nantsoina hatrizay hoe :
Ligin’ny baolina kitra Atsimo Andrefana Resin’ny Import Sport 3-2M ny 3Fb Toliara
Tontosa ny alahady 13 janoary tao amin’ny kianjan’Andaboly Toliara ny andro faha-3 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitran’Atsimo Andrefana 2018/2019 sokajy D–1.
« Basket Tournoi U 10 sy Super-Vétérans » Analamanga Mahavelombolo ireo taninketsan’ity taranja ity
Mahavelombolo raha ny zava-nisy hita teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano omaly alahady 13 janoary 2019 no asian-teny mikasika ny hoavin’ny taranja basikety baolina.
Ligin’ny baolina kitra any V7V - seksiona Manakara Nanomboka ny sabotsy teo fiadiana ny ho tompondaka
Hanomboka amin’ny zoma 15 febroary 2019 ka hifarana amin’ny alarobia 27 febroary 2019 ny fifaninanana baolina kitra fiadiana ny ho tompondakan’ny ligy rejionalin’i V7V handraisan’ny seksiona 4 anjara dia Antsevolo,Vohipeno, Fanadiana ary Manakara.
Tontosa omaly alarobia teto Antananarivo ireo lalao baolina kitra Afrikanina nandraisan’ny ekipa Malagasy anjara.
Teo amin’ny fifaninanana natokana ho an’ireo ekipa tompondaka notanterahina teny amin’ny kianjan’i Vontovorona dia voatazon’ny Fc Platinum avy any Zimbabwe ady sahala an-taniny 1-1 ny CNaPS Sport solontena Malagasy. Penality nampidirin’i Ando teo amin’ny 64’ ny baolina matin’ny Malagasy izay nosahalain’ny Zimbaboeana teo amin’ny 70’ tamin’ny alalan’i Mandanga. Tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina kosa dia lavon’ny Elgeco Plus tamin’ny 3-1 ny ekipan’ny Deportivo Unidad avy any Guinée Equatoriale. Baolina matin’i Nestor teo amin’ny minitra faha-10 sy faha-55 ny roa tamin’ireo ary tafiditr’i Bela teo amin’ny minitra faha-50 ny iray. Penality matin’i Julio kosa teo amin’ny minitra faha-6 ny baolina tafiditry ny Deportivo Unidad. Manana herizika kokoa hiakarana any amin’ny dingana manaraka, araka izany, ny ekipan’ny Elgeco Plus na dia samy hivahiny any an-tanin’olona aza izy sy ny CNaPS Sport amin’ny herinando ho avy io. Nisongadina ny nanatrehan’ireo mpikambana ao amin’ny Comité de normalisation an’ireto lalao 2 ireto saingy nifampizara roa izy ireo ka ny mpikambana 2 nanatrika teny Vontovorona ary ny mpikambana 2 hafa kosa tetsy Mahamasina.